Mandalay – MCDC
အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြထားသောဆောင်းပါး – မန္တလေး နန်းတော်
ယခင်က “ရတနာပုံ” ဟုအမည်တွင်ခဲ့ပြီး နောင်အခါ “မန္တလေးတောင်” ကိုအစွဲပြု၍ “မန္တလေး”ဟု အမည်တွင်လေသည်။
၁၈၈၅ ခုနှစ် တတိယ အင်္ဂလိပ် – မြန်မာ စစ်ပွဲအပြီး မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေး ဆုံးရှုံး၍ အင်္ဂလိပ် တို့၏ လက်အောက်သို့ကျရောက်ခဲ့ကြသည်။ မီးရထားပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးစနစ်ကို ၁၈၈၉ ခုနှစ်တွင် တည်ဆောက်ပေးခဲ့သည်။ ၁၉၂၅ ခုနှစ်တွင် မန္တလေးကောလိပ် ကို တည်ဆောက်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့သည်။
တပါတီ မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီ (မဆလ) အစိုးရ လက်ထက် (၁၉၆၂ – ၁၉၈၈) အတွင်း မန္တလေးမြို့၏ အသွင်အပြင်မှာ ကျဆင်းခဲ့ရသည်။ ၁၉၈၀ အစောပိုင်းမှာတော့ အထပ်နှိမ့် အဆောက်အအုံအသစ်များ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။ လမ်းမများပေါ်မှာ စက်ဘီးများဖြင့် စည်ကားလျက်ရှိပြီး စက်ဘီးမြို့တော်ဟု နာမည်တွင်ခဲ့သည်။ ၁၉၈၁ ခုနှစ် မေလ တွင် လောင်ကျွမ်းခဲ့သောမီးကြောင့် အိမ် ၆၀၀၀ ခန့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီး လူဦးရေ ၃၆၀၀၀ ကျော် အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ ဖြစ်ခဲ့ရသည်။ ၁၉၈၄ ခုနှစ် မတ်လ ၂၄ ရက်နေ့တွင် လောင်ကျွမ်းခဲ့သောမီးကြောင့် အိမ် ၂၇၀၀ ခန့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ပြီး လူပေါင်း ၂၃၀၀၀ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ ဖြစ်ခဲ့သည်။ မီးလောင်မှုများသည် မန္တလေးမြို့၏ တိုးတက်မှုကို တုံ့နှေးစေခဲ့သည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် လောင်ခဲ့သောမီးကြောင့် မန္တလေးမြို့၏ ဒုတိယအကြီးဆုံးဖြစ်သည့် ရတနာပုံဈေး တစ်ခုလုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ နောက်ထပ် အကြီးအကျယ်လောင်ကျွမ်းခဲ့သောမီးမှာ ၂၀၀၉ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီတွင် လောင်ကျွမ်းခဲ့သောမီးဖြစ်သည်။ အိမ် ၃၂၀ ကို လောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီး လူဦးရေ ၁၆၀၀ ကျော် အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ ဖြစ်ခဲ့ရသည်။
အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြထားသောဆောင်းပါး – မဟာမုနိ ရုပ်ရှင်တော်မြတ်ကြီး(မန္တလေး)
မဟာမုနိဘုရား ရုပ်ပွားတော်ကြီးသည် မန္တလေးမြို့၏ အထင်ကရ နေရာ တစ်ခု ဖြစ်သည်။ ဂေါတမ မြတ်စွာဘုရားက ရင်ငွေ့တော် (၇)ကြိမ် ပေးခဲ့သဖြင့် သက်တော် ရှိသည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။ ဘိုးတော်ဘုရား(ဗဒုံမင်း)လက်ထက် ၁၇၈၄ ခုနှစ်တွင် သားတော်အိမ်ရှေ့မင်းသား ဦးပေါ်က ရခိုင် မှပင့်ဆောင်ခဲ့သည်။
အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြထားသောဆောင်းပါး – မန္တလေးတောင်
မန္တလေးတောင်သည် မန္တလေးမြို့၏ မြောက်ဘက်တွင် တည်ရှိသည်။ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်မှ ၂၃၀ မီတာ မြင့်သည်။ စေတီပုထိုးပေါင်း များစွာ တည်ထားသည်။ မန္တလေးတောင်သည် မန္တလေးမြို့ကိုအပေါ်မှ စီးပိုးအုပ်မိုးထားသကဲ့သို့ ရှိပေရာ၊ မန္တလေးတောင်ပေါ်မှနေ၍ ကြည့်သော်နန်းမြို့ရိုး၊ ကျုံးနှင့်တကွ မန္တလေးမြို့၏ ရှုခင်းကို ကောင်းမွန်စွာမြင်တွေ့ရပေသည်။ အရှေ့ဖက်သို့ မျှော်ကြည့်လိုက်လျှင် ရှမ်းရိုးမတောင်နှင့် အနောက်ဖက်သို့ ကြည့်လိုက်လျှင် ဧရာဝတီ မြစ်ကမ်းများကိုလည်း မြင်တွေ့နိုင်ပေသည်။ မန္တလေးဟူသော အမည်သည် ‘မဏ္ဍလ’ ဟူသော ပုဒ်မှ’မဏ္ဍလေး’၊ ထိုမှ ‘မန္တလေး’ဖြစ်လာသည်ဟု ယူဆဖွယ်ရှိ၏။ အဓိပ္ပါယ်မှာ ‘ပျံပျူးသာယာသော နယ်မြေ’ ဟု ယူဆသော်ရ၏။အချို့က ‘မန္ဓရေး’ မှ ပြောင်းလာဟန်ရှိသည် ဟုဆိုကြသည်။ အဓိပ္ပါယ်မှာ ‘ကျက်သရေတို့ကို ဆောင်အရပ်’ ဖြစ်၏။ အချို့ကလည်း ရှေးပုံဂံခေတ်က မင်းရှင်စော မင်းကလေး မှီခိုနေသွားသော တောင်ဖြစ်ခြင်းကြောင့် မင်းကလေးတောင်ဟု တွင်ရာမှ မန္တလေးတောင်ဟူ၍ ဖြစ်လာပြီးလျှင်၊ နောင်သော် ထိုတောင်၏ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ မန္တလေးအရပ်တွင် မြို့တည်သဖြင့် မန္တလေးမြို့ဟု ဖြစ်ပေါ်လာသည်ဟုဆိုကြသည်။
မန္တလေးဘူတာကြီးမှာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အဓိက အချက်အချာ လမ်းဆုံမှာ တည်ရှိသည်။ မန္တလေးမှ ရထားဖြင့် ရန်ကုန်မြို့၊ နေပြည်တော်၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့၊ လားရှိုးမြို့၊ မုံရွာမြို့၊ ပခုက္ကူမြို့၊ ကလေးမြို့၊ ဂန့်ဂေါမြို့၊ ရွှေဘိုမြို့၊ ကောလင်းမြို့၊ နဘားမြို့၊ ကန့်ဘလူမြို့၊ မိုးညှင်းမြို့၊ ဟိုပင်မြို့၊ မိုးကောင်းမြို့၊ မြစ်ကြီးနားမြို့ မြို့များသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည်။
မြန်မာ – တရုတ်ကားလမ်း : မန္တလေး – တကောင်း – ဗန်းမော် – မြစ်ကြီးနား ကားလမ်း၊ မန္တလေး – မိုးကုတ် – ဗန်းမော်လမ်း၊ မန္တလေး – လားရှိုး – မူဆယ်လမ်း
မြန်မာ – အိန္ဒိယကားလမ်း : မန္တလေး – စစ်ကိုင်း – မုံရွာ – ကလေးဝ – တမူးလမ်း
ရန်ကုန် – နေပြည်တော် – မန္တလေး အမြန်လမ်းမကြီး
မန္တလေးမြို့သည် မန္တလေးမြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ ၏ အုပ်ချုပ်မှုတွင် တည်ရှိသည်။ မန္တလေးမြို့တော် စည်ပင်သာယာနယ်နိမိတ်ကို မြို့နယ်၆ခု ၊အရံမြို့နယ် ၁ခုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ မန္တလေးစည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ နယ်နမိတ်တွင် အောက်ဖော်ပြပါ မြို့နယ် (၇) နယ်ပါဝင်သည်။
မန္တလေးမြို့သည် မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်းနှင့် အထက်ပိုင်း ဒေသများ၏ အဓိက စီးပွားရေးစင်တာ တစ်ခု ဖြစ်သည်။ တရုတ်နှင့် အိန္ဒိယ တို့ကဲ့သို့သော ပြည်ပ ကုန်သွယ်မှုများအတွက် လမ်းကြောင်းသည် မန္တလေးမြို့ကို ဖြတ်သွားရသည်။ အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှာ ပိုးလုပ်ငန်း၊ ကျောက်စိမ်း ဖြတ်တောက် အရည်တင်ခြင်း၊ ပရိဘောဂ လုပ်ငန်း၊ အလှဆင်ကျောက်လုပ်ငန်း၊ ကျောက်ဆင်းတုတော်များနှင့် သစ်သား ရုပ်ပွားတော်များ ထုလုပ်ခြင်း၊ ငွေပြားခတ်ခြင်း၊ ရွှေဆိုင်းခတ်ခြင်း၊ အစရှိသည်တို့ ဖြစ်ကြသည်။
Mandalay (/ˌmændəˈleɪ/ or /ˈmændəleɪ/; Burmese: မန္တလေး; MLCTS: manta.le: [máɴdəlé]) is the second-largest city in Myanmar, after Yangon. Located on the east bank of the Irrawaddy River, 716 km (445 mi) north of Yangon, the city hasapopulation of 1,225,553 (2014 census).
Mandalay was founded in 1857 by King Mindon, replacing Amarapura as the new royal capital of the Konbaung dynasty. It was Burma’s final royal capital before the kingdom’s annexation by the British Empire in 1885. Under British rule, Mandalay remained commercially and culturally important despite the rise of Yangon, the new capital of British Burma. The city suffered extensive destruction during the Japanese conquest of Burma in the Second World War. In 1948, Mandalay became part of the newly independent Union of Burma.
Today, Mandalay is the economic centre of Upper Myanmar and considered the centre of Burmese culture. A continuing influx of Chinese immigrants, mostly from Yunnan, in the past 20 years, has reshaped the city’s ethnic makeup and increased commerce with China. Despite Naypyidaw‘s recent rise, Mandalay remains Upper Burma’s main commercial, educational and health center.
When it was founded in 1857, the royal city was officially named Yadanabon (ရတနာပုံ, [jədənàbòʊɴ]),aloan of the Pali name Ratanapūra (ရတနပူရ) “City of Gems.” It was also called Lay Kyun Aung Myei (လေးကျွန်းအောင်မြေ, [lé dʑʊ́ɴ àʊɴ mjè], “Victorious Land over the Four Islands”) and Mandalay Palace (မြနန်းစံကျော်, [mja̰ náɴ sàɴ tɕɔ̀], “Famed Royal Emerald Palace”).
The new capital city site was 66 km2 (25.5 sq mi) in area, surrounded by four rivers. The plan called fora144-square block grid patterned citadel, anchored bya16 square block royal palace compound at the center by Mandalay Hill. The 1020-acre (413-hectare) citadel was surrounded by four 2,032 m (6,666 ft) long walls andamoat 64 m (210 ft) wide, 4.6 m (15 ft) deep. At intervals of 169 m (555 ft) along the wall, were turrets with gold-tipped spires for watchmen. The walls had three gates on each side, and five bridges to cross the moat. In addition, the king also commissioned the Kuthodaw Pagoda, the Pahtan-haw Shwe Thein upasampada hall, the Thudamma “Good Dharma” zayats (IPA: [zəjaʔ]) or public houses for preaching Buddhism andalibrary for the Pāli Canon.
The Thudammazayats built during the reign of Mindon Min
During World War II, Mandalay suffered the most devastating air raids of the war. On3April 1942, during the Japanese conquest of Burma, the Imperial Japanese Army Air Service carried out an extensive assault. The city was in effect defenseless as its firefighting resources were weak, having been lost in earlier bombing, it had no anti-aircraft capacity, and the British RAF had by now withdrawn all its aircraft to India. Three-fifths of Mandalay’s houses were destroyed and 2,000 civilians were killed. Many residents also fled when the city was under Japanese occupation from May 1942 to March 1945. The palace citadel, which had been turned intoasupply depot by the Japanese, was in turn burnt to the ground by Allied bombing; only the royal mint and the watch tower survived. (A faithful replica of the palace was rebuilt in the 1990s.)
During Ne Win‘s isolationist rule (1962–1988), the city’s infrastructure deteriorated. By the early 1980s, the second largest city of Burma resembledatown with low-rise buildings and dusty streets filled mostly with bicycles. In the 1980s, the city was hit by two major fires. In May 1981,afire razed more than 6,000 houses and public buildings, leaving more than 36,000 homeless. On 24 March 1984, another fire destroyed 2,700 buildings and made 23,000 people homeless.
7,398 ကြည့်ရှုသူပေါင်း, 14 ယခုကြည့်ရှုသူပေါင်း
← Mandalay RegionThe Mandalay Daily News (5.4.2020) →
7,400 ကြည့်ရှုသူပေါင်း, 16 ယခုကြည့်ရှုသူပေါင်း
7,403 ကြည့်ရှုသူပေါင်း, 19 ယခုကြည့်ရှုသူပေါင်း